Rafael Nadal oo si dirqi ah ugu guuleystay ciyaartii finalka Tennis-ka ee US Open… – Hagaag.com
Posted on 9 Seteembar 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Rafael Nadal ayaa soo bandhigay xirfadiisa ciyaartii Tenniska US open ee finalka Ragga, kadib markii uu ku guuleystay markiisii 19 aad ee Grand Slam, kadib markii uu ugu awood sheegtay laacibka Daniil Medvedev oo ka soo jeeda Ruushka: 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Ciyaar socotay 4 saac iyo 50 daqiiqo.
Rafael Nadal oo ka xiga Rikoorka ku guuleysiga Grand Slam-ka hal guul, waxaana rikoorkaasi heysta Roger Federer oo 20 jeer ku guuleystay. Nadal ayaa la arkayey asaga oo ilmeynaya.
Nadal ayaa yidhi: “Qaabkii ciyaartu oo ay noqotay mid aad layaab u leh dhamaadkeed ayaa ka dhigeysa maalin aan la ilaawi karin.”
Taageerayaasha Tennis-ka US open ayaa u waashay Daniil Medvedev qaabkii uu u ciyaaray iyo xirfada aadka u sareysa oo uu soo bandhigay. Taageerayaasha ayaa aad u difaacay Daniil oo la saftay, wuxuu sheegay in marka ay kororto taageeradooda ay badintiisu sii kordheysay.
Medvedev wuxuu muujijey runtii dadaal aad u badan asaga oo u aheyd markii ugu horeysay ee finalka US Open imaado.
“Waxaan ula jeedaa, waxay ahayd ciyaar cajiib ah. Waa sheeko la yaab leh,” ayuu yiri Medvedev. Xagaagan oo dhan wuxuu ii ahaa mid cajiib ah. Waana xasuusan doonaa daqiiqad kasta oo ka mid ah. ”
Daniil ayaa jira 23 sano halka Nadal uu jiro 33 sano, sidaasi darteed waa nin mustaqbal ku lahaan doona ciyaaraha Tenniska ee soo socda, farihiisana ay ka muuqan doonaan Tennis-ka hadaan wax kale ku dhicin.